Fọl LGD-2226 (328947-93-9) hplc ma98% | AASraw SARMS ntụ ntụ
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka N'Ịntanet, Canada Nweta Ụlọ, European Delivery Delivery
Boldenone ntụ ntụ
Methenolone ntụ ntụ
Nandrolone ntụ ntụ Usoro
Trenbolone ntụ ntụ Usoro
Testosterone ntụ ntụ
Estradiol ntụ ntụ Usoro
Mmekọahụ Mmebi Hormones
R & D mmeghachi omume
3rd Labs Ule
LGD-2226 ntụ ntụ
/ ngwaahịa / SARMS / LGD-2226 ntụ ntụ
5.00 si 5 dabere na 1 ahịa fim
SKU: 328947-93-9. Category: SARMS
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke LGD-2226 ntụpụ (328947-93-9), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
Ọnwụnwa ụlọ ọgwụ na LGD-2226 ntụ ntụ na mmetụta ya na-aga n'ihu ma nyocha mbụ gosiri na chemical nwere ụfọdụ mmetụta anabolic na ọkpụkpụ na anụ ahụ. Ihe kachasị gbakwunyere na nke LGD-2226 uzuzu bu eziokwu na ule nke ugbua egosiwo na o nweghi uru di nfe na onu prostate na luteinizing hormone ma e jiri ya tụnyere steroid na SARM ndị ọzọ.
Ntughari & akwukwo akwukwo
LGD-2226 na-acha uzuzu uzuzu
aha: LGD-2226 ntụ ntụ
Molekụla Formula: C14H9F9N2O
Ọbara arọ: 392.219g
Melt Point: 187-190 ° C
Nchekwa Nche: friji
agba: White ma ọ bụ na-acha ọcha Crystalline ntụ ntụ
Ngwa ntụziaka LGD-2226 dị na SARMS
LGD-2226 ntụ ntụ bụ ọgwụ na-achọ nchọpụta maka ọgwụgwọ nke osteoporosis na mgbu ahụ. Ọgwụ a bụ onye na-ahọrọ androgen receptor modulator ma họrọ ya iji nye ihe ọzọ maka iji steroid maka bodybuilders.
Ejiri LGD-2226 bụ ọgwụ eji enye ọnụ ma jiri mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ were ya. Ihe nlekọta ụlọ ọgwụ ka na-agbatị usoro ọgwụgwọ ahụ, karịsịa maka ndị nwere ike iji SARM dịka akụkụ nke ịgha ha, ịchacha, ma ọ bụ ịmaliteghachi oge. Otú ọ dị, ọ gaghị adịte aka ruo mgbe usoro ọgwụgwọ ahụ pụta.
Kedu Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịtụ Anya na LGD-2226 ntụ ntụ
Enwere ọnụọgụ dị iche iche nke LGD-2226 nwere ike inye ndị ọrụ ya.
Lee ụfọdụ n'ime ha:
A hụwo ihe ngosipụta nke LGD-2226 ntụpọ dị irè. Nke a na-enye ndị ọrụ ohere iji SARM na-efu ngwa ngwa n'amaghị mmeghachi omume ma ọ bụ mmetụta ndị na - akpata steroid.
Ọ pụkwara inye aka mee ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ sie ike maka ndị na-etolite. Ndị nwere ọdịdị ọkpụkpụ, ha nwere ike ịba uru site n'aka LGD-2226 ntụ ntụ.
Fọl LGD-2226 nwekwara ike ịbụ nnukwu ume ike. Mmetụta ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro mgbatị ahụ na ntụle LGD-2226 ga-enye gị nke ahụ. SARM agaghịkwa akpata mgbanwe nke estrogen ma ghara imetụta mmepụta nke testosterone.
A hụkwara ntụ ntụ LGD-2226 ka enwee mmetụta dị mma iji melite libido n'etiti ndị nwoke. Ihe ize ndụ nke ịmalite ịmụ nwa adịghịkwa n'ebe ahụ, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka ụmụ nwanyị.
Kedu ka LGD-2226 uhie si arụ ọrụ
LGD-2226 ntụ ntụ bụ SARM siri ike ma kwuo okwu nke na-arụ ọrụ dịka ọ bụla ọzọ. SARM a na-eme ka uru ahụ na ọkpụkpụ anụ. Ọ na-enyere aka ịmalite ime ihe na-eme ka a na-eme ihe na-eme ka ị na-eme ya. Ahụ na-emepụta testosterone n'ụdị iwu na n'ọnọdụ ụfọdụ, hormone nwere ike ọ gaghị ezu iji kpalite ihe a chọrọ na androgenic iji mee ka ume ahụ dị mma maka mgbatị.
Na mgbakwunye na nke a, n'ọnọdụ ka njọ, testosterone mepụtara n'ime ahụ nwere ike ọ bụ ntakịrị, na-eduga na nkwarụ ahụ. A pụrụ iji ntụ ntụ LGD-2226 mee ihe dịka ngwọta maka nsogbu ndị a nile. Nhọrọ ya nke ga - emepụta ihe na - eme ka androgenic rụọ ọrụ na mkpụrụ ndụ ahụ ike mgbe ọ na - achọpụta na mmepụta nke testosterone abaghị uru. Maka bodybuilders, nke a nwere ike inye aka mee ka mgbatị dịkwuo mma, na-eduga n 'arụpụta dị mma.
SARMS ma ọ bụ Nhọrọ Androgen Rescept Modulators bụ ụdị nke androgensthat dị iche iche na-arụ ọrụ dịka ụbụrụ anabolic na ndụmọdụ dị iche iche na-eme ka ihe dị iche iche na-ebute na steroid. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na ndị bodybuilders agbanwewo na SARMS n'ihi na ọ dị ize ndụ ma dịkwuo irè n'ịzụ ụlọ ahụ na ume na-arịwanye elu n'emeghị ka ahụike dị n'ihe ize ndụ.
Otu SARM nke na-ebili mmiri taa bụ LGD-2226 ntụ ntụ - SARM na nkwụsị nke mbụ ya nke a na-emepụta dịka ọgwụgwọ maka ịmịkọrọ ahụ na osteoporosis. Ozi ka dị oke, ma nke a bụ ihe anyị maara banyere ntụ ntụ LGD-2226 dịka nke oge ahụ.
LGD-2226 ntụ ntụ bụ onye na-arụ ọrụ nke ọma, onye dị ike na onye na-ahọrọ ihe maka ndị na-anabata (androgen) (AR) bụ ndị e kweere na ha nwere mmetụta ụbụrụ na ahụ ike na ọkpụkpụ, ma na-enwe mmetụta ole na ole na-arịa ọrịa prostate na hormone luteinizing (hormone gọọmenti dị na ma ndị nwoke ma ndị inyom) dị ka tụnyere testosterone.
Ntughari akwukwo nso nke osteoporosis n'ime ndi nwoke, na ikekwe ndinyom, bu mmepe nke ndi na-azoputa ndi na-acho orrogen (SARM) nke puru ime ka ekere ohuru ohuru na ihe omumawanye nke prostate, nakwa nke na-eme ka ndi nwanyi . N'ime afọ ole na ole gara aga, anyị amalitela mmemme iji chọpụta na ịmepụta akwụkwọ akụkọ, ndị na-abụghị steroidal, ndị na-ahọrọ ndị na-emepụta ihe na-eme mgbanwe nke na-eme ka a na-emepụta ihe na-eme ka ahụ dịkwuo mma. Na nnyocha ndị na-adịbeghị anya, anyị ejirila oke oke ụmụ anụmanụ (ORX) dịka ihe atụ ụmụ anụmanụ na-atụle arụmọrụ nke LGD2226, onye na-adịghị ahụ maka oyi, na-abụghị aromatizable, na nke na-abụghị 5alpha-reducible SARM. Anyị nyochachara ọrụ nke LGD-2226 nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ, ụda ọkpụkpụ na ike ọkpụkpụ, ma nyochaa mmetụta ndị na-adabere na ndabara na-adabere na androgen, dị ka prostate, seminal vesicles na ahụ ike. A hụrụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ na anụ ọhịa ORX, ọ bụ SARM gbochiri ihe a, yana ọkọlọtọ androgens. Ihe nyocha nke biochemical nke ntụgharị nke ọkpụkpụ kpughere mmụba mbido nke resorption ọkpụkpụ na androgen-deficient rats nke edoziworo na ORX ụmụ anụmanụ na-agwọ SARM, LGD2226, n'oge oge ọgwụgwọ 4. Esemokwu dị iche iche na-arụpụta ihe na-emepụta ihe na-arụpụta ihe dị iche iche na-arụpụta ihe dị iche iche na-emepụta mmetụta dị mma nke ụdị LGD-2226 powderon ọkpụkpụ na androgen-deficient oke. Nchịkọta akụkọ nke ọkpụkpụ na-egosi ụdị ọrụ anabolic nke dị na LGD-2226 okpukpu ụlọnga mkpụrụ ndụ. LGD-2226 nwere ike igbochi ọkpụkpụ ọkpụkpụ na ịnọgide na-enwe ọkpụkpụ n'ọkpụkpụ ORX site na ịmalite ọkpụkpụ ọkpụkpụ, ma na-egbochi mgbanwe ọkpụkpụ. LGD-2226 powderalso na-arụ ọrụ anabolic na levator ọbụna muscle. Ejikọta ọnụ, nsonaazụ ndị a na-egosi na ndị na-agwọ ọrịa, ndị na-abụghị steroidal SARM nwere ike ịbụ ndị bara uru ọgwụgwọ maka ahụ ike na ọkpụkpụ n'ime ndị agadi na-eme ka ndị agadi na-eme site na ọrụ ha. Ebe ọ bụ na SARM na-egbochi ọkpụkpụ ọkpụkpụ, na-akpalikwa ịmalite ọkpụkpụ ọkpụkpụ, ha nwere ike ịnwe uru dị ukwuu maka ndị a na-eji ọgwụgwọ ndị na-egbochi resorptive ugbu a. Ha jikọtara ọrụ ha na ahụ ike ha na ike ha iji nọgide na-arụ ọrụ ma ọ bụ weghachite libido, ha na-enye usoro ọgwụgwọ ọhụrụ maka mwepụ nwoke na nwanyị na-anọchi.
LGD-2226 Powder Powder
Min iji 10grams.
Ajuju ajuju nke di n'ogo (N'ime 1kg) nwere ike iziputa na 12 awa mgbe ugwo.
Enwere ike iziga usoro ka ukwuu na 3 ụbọchị ọrụ mgbe ịkwụ ụgwọ.
LGD-2226 uzuzu ahia ahia
A ga-enye ha n'ọdịnihu na-abịa.
Egwuregwu LGD-2226 na-acha uhie uhie nwere mmetụta ọ bụla
Enweghi mmetụta ọ bụla a mara nke iji ntụ ntụ LGD-2226. Ọ dị mkpa ikwughachi na ọ bụ SARM ka a na-eme ugbu a ma na-enwe nsogbu ule na-aga n'ihu. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji kwere na enwere mmetụta ọ bụla dị iche iche na ndị ọrụ nchegbu n'oge ahụ.
Esi zụta LGD-2226 ntụ ntụ si AASraw
1.To kpọtụrụ anyị site na email anyị usoro nyocha, ma ọ bụ skype onye na-ahụ maka ndị ahịa (CSR).
2.To nye anyị ọnụọgụgụ na adreesị gị.
3.OUR CSR ga-enye gị nkọwa, okwu nkwụ ụgwọ, nọmba nchịkọta, ụzọ nnyefe na ụbọchị mbata echere (ETA).
4.Bayment done and the goods will be sent out na 12 awa (N'ihi na iwu n'ime 10kg).
5.Goods natara ma kwuo ihe.
Ikwu ma obu Ozi
LGD-2226 Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ:
Ịjụ ajụjụ maka ndị na - anọchite anya anyị (CSR) maka nkọwa, maka amaokwu gị.
Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Tupu Ịzụta LGD-2226 Powder
MK 677 (Ibutamoren) ntụ ntụ
S4 (Andarine) ntụ ntụ
Mpempe akwụkwọ PRL-8-53
LGD-4033 (VK5211) Ligandrol ntụ ntụ
Ndị na ere ere
MMAD (10 Demethyldolastatin)
Nwa nna (566-48-3)
Nootropics ntụ ntụ (13)
Ihe nkuzi (10)
R & D mmeghachi omume (40)
Boldenone ntụ ntụ (4)
Usoro Drostanolone (2)
Methenolone ntụ ntụ (2)
Nandrolone ntụ ntụ Usoro (7)
Testosterone ntụ ntụ (18)
Trenbolone ntụ ntụ Usoro (6)
Estradiol ntụ ntụ Usoro (7)
Mmekọahụ Mmebi Hormones (12)
Nwanyi eji (3)
Nwoke Jiri (3)
Ọla abụba (14)
Ọgwụ PCT (6)
Osisi wepụ (3)
ndị ọzọ na- (14)
Ngwa kachasị ọhụrụ
Ihe 8 kachasị na-enwe mmekọahụ na-akpata ọgwụ ọjọọ na ụwa
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke 10 kachasị mma nke Loss Powder
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke -Phenylpiracet
Zụrụ Testosterone Enanthate ntụ ntụ na nnukwu
Modafinil: Ebe ịzụta nnukwu Modafinil ntụ ntụ
Kedu ka Flibanserin si enyere nwanyị aka dị ka Hormone Mmekọahụ
Ihe ọ bụla gbasara Oxandrolone (Anavar), ịkwesịrị ịma
Ntuziaka Zuru Oke 2019 Maka SARM SR9009 Isi
Echiche ndị a na-ahụkarị na steeti anabolic steroid
MK-677 (Ibutamoren) na-arụ ọrụ nke ọma Maka Buildinglọ Arụ Ọrụ? Nyocha Sarm [2019 NEW]
-adịbeghị anya Comments
Dr. Patrick Young on Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ
Dr. Patrick Young on Oxandrolone (Anavar) ntụ ntụ
Michael McCoy on Oxandrolone (Anavar) ntụ ntụ
Vitaliy on Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ
Aasraw on Nwa nna (566-48-3)
Testosterone Cypionate (Ule test) ntụ ntụ
Methenolone Enanthate ntụ ntụ
Etravirine ntụ ntụ
Dienolone ntụ ntụ (6218-29-7)
Estradiol Benzoate ntụ ntụ
Ihe 10 kachasị mma Anabolic Steroids Material Raws
Copyright © 2019 aasraw Ikike niile echekwara. Ezubere ya www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com